Muxuu Madaxweynaha Somaliland Ka Yidhi Safarkii Uu Ku Tegay Guinea Iyo Go'aankii Somaliya Xidhiidhka Ugu Jartay - Jigjiga Online
HomeSomalidaMuxuu Madaxweynaha Somaliland Ka Yidhi Safarkii Uu Ku Tegay Guinea Iyo Go’aankii Somaliya Xidhiidhka Ugu Jartay
Hargeysa (jigjigaonline) – Madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay in hadalka Soomaaliya uu bannaanka soo dhigay laba godobood.
Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in godobta koobaad ay Soomaaliya ka gashay dowladda Guinea oo uu sheegay inay faraha la galeen arrimaha gudaha ee dalkaasi.
Soomaaliya ayaa waxa ay xiriirkii diblumaasiyadeed u jartay dowladda Guinea kaddib markii ay dalkeeda ku casuuntay madaxweynaha Somaliland si diirranna ay halkaas ugu soo dhawaysay.
Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in Soomaaliya oo magan u ah ciidammo shisheeye ay maagtay dal xor ahaa sanado badan, iyagoo ku leh sidee gurigaaga Somaliland ugu casuuntay. Hasayeeshee waxa uu sheegay in Guinea ay arrintaas ka falcelisay oo ay si adag isaga dhicisay Soomaaliya.
Godobta labaad ayuu madaxweynaha Somaliland ku sheegay in Soomaaliya ay ka gashay Somaliland oo ay quuri waayeen buu yiri maamuuska noocaas ah ee nalagu soo dhaweeyay.
“Waxaan la yaabanahay ragga xukuumaddaa ka tirsan ee sidaa ku tashaday, marka hore, godobta intaa la eg waxa ku kalifaya, hebal uma qalmo maamuuskaas iyo qarankaa intaa la eg uma qalmo maamuuskaa waa godobta intaa la eg waxa ay ugu bareereen waa la is waydiinayaa.”
“Waa rag soo wada joogay soddonkii sanadood ee ugu dambeeyay wixii dalka ka dhacay iyo Somaliland wixii loo gaystay dad xog ogaal u ahna way yihiin dhammaantood, garan maayo iyagoo taa hore qaba waxa ay taa ugu dareen.” ayuu yiri Biixi.
Hadalka Muuse Biixi Cabdi ayaa imanaya kaddib markii shalay wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Amb Axmed Ciise Cawad, uu sheegay in Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin in dal ka mid ah caalamka uu wax u dhimo midnimada qaran ee dalka.
“Soomaaliya ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya oo gooni u taagan adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas, sharciyada adduunka oo dhan iyo go’aammada adduunka oo dhan UN. AU, Dalalka Islaamka, Carabta iyo Igad kulligood waxay qiraan Soomaaliya iney tahay hal dal iyo hal dal oo mid ah marka adduunku saasuu qabaa saaseyna tahay.”
“Adduunkana waa insey sidaas dalalka qaarkood ay ixtiraamaan weeye go’aammada adduunka ee ay qaybta ka yihiin, wixi khilaaf jira Soomaalida iyo iyaga dhexdooda iney ka wada hadlaan weeye, xukumadda Soomaaliyana sida xukumadihi hore diyaar ayey u tahay walaalahood Soomaliland la hadasho, la fariisato, la heshiiso, la isfahmo laakiin dalkaleeto inuu noo carqaladeeyo dhib noo abuuro kama yeeleyno waxaanna u sheegay inaan Guinea ka yeeleyn” ayuu yiri wasiir Cawad.
“Waxaan u sheegnay iney jiraan khatar iyo olole khatar gelin karo midnimada Soomaaliya oo socda waxaan u sheegnay in ololahaasi socdo ay ka mid yihiin dalal la yaqaanno sidaa daraaddeed waxaan codsannay in ay adduunka naga kaalmeeyaan iyo iney u sheegaan dalalka adduunka iney ka daayaan dhibka.” ayuu yiri wasiir cawad oo ka warramayey waxa ay kala hadleen wakiillada dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya.
Dhanka kale Golaha wakiillada Somaliland ayaa si weyn u soo dhaweeyey booqashada uu madaxweyne Biixi uu ku tagay dalka Guinea, wuxuuna goluhu shaki ka muujiyey inuu sii socon karo wadahadalladi Somalia iyo Somaliland u dhaxeeyey.
Guddoomiye ku xigeenka Golaha Wakiillada Somaliland Axmedyaasiin Sheekh Cali Ayaanle, ayaa kulanka maanta golaha uu yeeshay uga warramay BBC-da, isaga oo si gaar ah shiishka u saaray hadalka ka soo yeedhay Dowladda Soomaaliya oo 24-kii saac ee u dambeeyey warbaahinta si weyn u dhex marayey.
Wuxuuna guddoomiya ku xigeenku sheegay “Jamhuuriyadda Somaliland haddii taariikh ahaan iyo waaqic ahaana loo eego cidina ma dafirsana iney ahayd qaran madaxbannaan oo 26-kii June madaxbannaanidiisa ka qaatay mustacmaraddii Ingiriiska.”
“Iyaga oo xor ah oo caqligooda qaba oo walaal jeceyl Soomaali jeceyl ooy ugu biireen ooy ula midoobeen israacii labada gobol wakhtigi la oran jiray.”
“Si taa la mid ah marki ay waayeen wixi ay ku riyoonayeen waayeen oo ay ku hungoobeen iyada oo dhibaatooyin iyo taariikh xoog leh oo badani ayaa dib loola soo noqday si madax bannaan, taa waa middi taariikhda, Somaliland waa xaqiiqa jirta oo dunida la macaamisha, oo dowladaha waaweyn oo caalamka la macaamilaan oo UN-ta la macaamisho.”
“Balse waxaa ayaan darra ah ummad Soomaaliyeed oo dal jeceyl iyo wada dhalasho iyo walaalnimo aan dowladdayadii dhammeed ugu hibeynay warki balada naga raacdayna aan nidhi aan kala eed la’aanno iney maanta ay jiritaanka iyo wixi Somaliland wanaag u soo kordho ay cadaawad ka muujiyaan waan ka xunnahay tan koowaabaad waxaana taa nooga horreysay tii DP world marki ay maalgashatay dekedda Barbara” ayuu yiri guddoomiya ku xigeenka.